यस्ता छन् सि.जी एसी को प्रमुख आकर्षण - Ratopati
काठमाडौं, जेठ १२ – प्रस्पिधात्मक एसी बजारमा बजारमा विभिन्न कम्पनी र ब्राण्डलाई च्यालेन्ज गर्दै सि.जी. ब्राण्डले नयाँ आकर्षक रुप र डिजाइनमा सिजी एसीहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
विभिन्न विशेषताका साथ नेपाली बजारमा निरन्तर रुपमा सि.जी. ब्राण्डले नेपाली बजारको माग र नेपालीहरुको आयस्रोतलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न किसिमका एयरकन्डीसनरहरु नेपाली बजारमा सर्वसुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउदै आएको कम्पनीको दावी रहेको छ ।
सि.जी.को प्रमुख उदेश्य भनेको नेपाली बजारमा सस्तो मुल्यमा गुणस्तरिय उत्पादन धेरै भन्दा धेरै स्थानमा पु¥याउने रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सि.जी एसी नेपाली बजारमा मुख्य गरी घरका साथै होटल, हस्पिटल, मन्त्रालय, बैक, पार्टी प्यालेस र सेमिनार हलहरुमा बढी नै प्रयोग गरिएको देख्न सकिन्छ । सि.जी. एउटा आफै नेपाली ब्राण्ड भएको र यसको गुणस्तर एवं सर्भिस नेपाल भरी उपलब्ध गरिरहेको साथ साथै नेपालको एकमात्र नेपाली आइएसओ ९००१ प्रमाणित कम्पनी भएकाले बजारमा उत्कृष्त मध्ये एक मान्छि ।
विभिन्न आकर्षक डिजाईन, मोडल एंव साइजहरुमा नेपाली बजारमा पूर्व को काकडभिट्टा देखि पश्चिमको महेन्द्रगनर सम्म सुलभ किसिमले खरिद गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीले निकै आकर्षक फुलको डिजाईन, डिजिटल डिस्प्ले र आकर्षक ग्लास प्यानल अनि सस्तो मुल्यमा बजारमा ल्याएको छ । त्यसैगरि नेपालभरी सर्भिस र जडानको व्यवस्था गर्दै यस एयरकन्डिसनरमा ३६ महिनाको प्रमुख कम्प्रेसर वारेण्टी दिदै आइरहेको छ ।
पाली बजारमा ०.७५ टन देखि २ टन सम्म, तातो र चिसो बनाउने क्षमता हुने वाल माउन्टेड खालको र २ देखि ४ टनसम्मको सिलीङ्क क्यासेट जुन सिलीङ्कको विचमा राख्ने खालको गरी दुई किसिमबाट उपलब्ध छ ।
त्यसैगरि इन्भरटरले नचलेतापनि कम विजुलीको भोल्टेजले पनि चलाउन सकिन कम्पनीको दावी रहेको छ ।
यस सि.जी. एयरकन्डीसनरमा भिटामिन इन्रीचीङ्ग फिल्टर र क्याटेचिन फिल्टर गरि दुई किसिमका फिल्टरहरुको प्रयोग गरिएको छ । भिटामिन इन्रीचीङ्ग फिल्टरले एन्टी स्ट्रिेस हार्मोन उत्पन्न गर्दछ । जसको कारण अब तपाईले आरामको अनुभुति गर्नु हुनेछ ।
यसले एन्टी क्यान्सर इम्युनिटी रेस्टे«न्ट क्लोस्ट्रोल र खियाहरु लाग्नबाट जोगाउने जस्ता धेरै कामहरु गर्दछ । त्यस्तै क्याटेचिन फिल्टरले बिभिन्न किसिमका ब्याक्टेरियाहरुबाट जोगाउने र कोठामा रहेको धुलोलाई चाडै हटाउनुका साथै दुर्गन्धहरुलाई पनि सजिलै हटाउने कम्पनीले जनाएको छ ।